विराटनगर इन्फोटेकमा अफैर अफर, अवलोकनकर्ताको भिड (तस्विरहरू सहित) - Purbeli News
शुक्रबार, आषाढ २६, २०७७
Trending # राशिफल242# मृत्यु196# पक्राउ140# मृत्यु125# पक्राउ57# नेकपा51# केपी शर्मा ओली46# एनसेल41
विराटनगर इन्फोटेकमा अफैर अफर, अवलोकनकर्ताको भिड (तस्विरहरू सहित)
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २१, २०७५ समय: २१:०७:२९
विराटनगर / विराटनगर स्थित जैन भवनमा जारी सुविसु क्यान इन्फोटेक २०१९ मा अवलोकनकर्ताको आकर्षण बढेको छ । शुक्रवार र शनिवार इन्फोटेकमा दशौ हजारले अवलोकन गरेको आयोजकले जानकारी दिएको छ । शनिवार स्मार्ट सिटी विषयमा कन्फ्रेन्स सम्पन्न भएको छ । काठमाण्डौबाट आउनुभएका प्रो.डा. मनिष पोखरेल, मडिन्द« अर्याल, तुषार न्यौपाने लगायतले डिजिटल गर्भनेन्स तथा स्मार्ट सिटीमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कन्फ्रेन्स विभिन्न नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरु सहित ७० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
क्यान महासंघ मोरङ शाखाको मुख्य आयोजना तथा लिभिङ विथ आइसिटीको सहआयोजनामा विहिवारदेखि इन्फोटेकमा सहभागी कम्पनीहरुले विभिन्न अफरहरु दिइरहेका छन । शुक्रवार र शनिवार अवलोकनकर्ताको राम्रो उपस्थिती भएको क्यान मोरङ सचिव सुमित शाहले जानकारी दिए । अब २ दिनमात्र बाकि रहेकोले अझ धेरै व्यत्तिहरुको उपस्थित हुने अपेक्षा रहेको उनको भनाई छ । शनिवार कम्पनीहरुले आफ्ना प्रडक्टहरुमा ५० प्रतिशतभन्दा बढि छुट दिएका छन । ल्यापटप, कम्प्युटर, एन्टिभाइरस, प्रिन्टर तथा सिसिटिभी लगायतका प्रडक्टमा कम्पनीहरु आकर्षक छुट दिएका छन । सुविसुले भयंकर अफर ल्याएर एकदमै सस्तो प्याकेजमा इन्टरनेट दिएको छ । यसैगरी विभिन्न प्रडक्टको खरिदमा अन्य प्रडक्टहरु निशुल्क उपलब्ध गराइएको छ ।
इन्फोटेकमा पहिलोपटक विभिन्न प्रडक्टहरु सार्वजनिक समेत भएका छन । विन्डोज वान बोर्ड अफिस, योगा बुक र केहि अत्याधुनिक सिसिटिभी क्यामेराहरु इन्फोटेकमा नयाँ प्रडक्टका रुपमा रहेका छन । सयभन्दा बढि स्टलहरुमा विभिन्न आकर्षक अफर र छुटहरु जारी रहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ । यसैगरी इन्फोटेकमा अन्य थुप्रै आकर्षणहरु रहेका छन । शनिवार रोबोवारको क्वाटर फाइनल र सेमि फाइनल सम्पन्न भएको छ । कसमस ग्रुप र डिस्ट्रक्सन समुहविच आइतवार रोबोवार फाइनल हुनेछ । रोबोवारमा १५ बढि समुहहरुको सहभागिता रहेको थियो । यसैगरी ह्याकाथन पनि सञ्चालन भइरहेको आयोजक समितीका अध्यक्ष राजन यादवले जानकारी दिए ।
यसैगरी इन्फोटेकमा १५ भन्दा समुह पब्जी गेम कम्पिटिशनमा भाग लिएका छन । धेरै युवाहरुको आकर्षण रहेको गेम प्रतिस्प्रधा तथा रोबोवारमा सहभागी हुने क्रम बढिरहेको छ । विद्यार्थीहरुले बनाएका स्मार्ट सिटी मोडलिङहरु पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका छन । भिडियो प्रतिस्प्रधा लगायतका अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरु भइरहेको आयोजकले जनाएको छ । ७ वर्षपछि विराटनगरमा भएको इन्फोटेकमा सोमबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
स्मार्ट सिटीमा आइसिटी कन्फ्रेन्स सम्पन्न
विराटनगरमा जारी क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइसिटी कन्फ्रेन्सको आयोजना भएको छ । स्मार्ट सिटी विषयमा केन्दि«त आइसिटी कन्फ्रेन्समा विभिन्न विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन । अब स्थानिय निकायको जिम्मेवारी धेरै भएकोले आइटीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
कार्यक्रममा कि नोट स्पिकरको रुपमा काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर मनिष पोखरेल रहनुभएको थियो । आइसिटी प्रयोग विना अब देश समृद्ध र विकास हुनै नसक्ने बताउदै पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अब स्थानिय निकाय र सरकारले आइटीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । यसैगरी कन्फ्रेन्समा एक्सेसिवल गुड गर्भनेन्समा तुषार न्यौपाने, फिनटेकमा इसेवाका रुपेश न्यौपानेले कार्यपत्र पस्तुत गर्नुहुने छ । यसैगरी आइओटी तथा पछिल्ला प्रविधिहरुको बारेमा मडिन्द« अर्यालले प्रस्तुती दिनुभएको थियो । साइबर क्राइमको बारेमा प्रकाश उप्रेतीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्यानल डिस्कसन समेत सञ्चालन भएको थियो । राजन लम्सालले सञ्चालन गरेको प्यानल डिस्कसनमा प्रा.डा मनिष पोखरेल, क्यान मोरङका अध्यक्ष राजन यादव, विराटनगर महानगरपालिकाका आइटी अफिसर यादव श्रेष्ठ र सून्दर हरैचाका आइटी अफिसर रोशन खनलाले सहभागिता जनाएका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न नगरपालिकाका प्रतिनिधि, आइटी कलेज तथा कम्पनीहरु सहित ७० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
आजको राशिफल / वि.सं. २०७७ आषाढ २६ गते (जुलाई १० तारिख) शुक्रबार
नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण रोकियो
सार्वजनिक यातायातको बढ्यो ५० प्रतिशत भाडा
भारतीय सञ्चारमाध्यमको अनर्गल र बकवासपूर्ण प्रचारप्रसारको पत्रकार महासंघद्वारा भत्र्सना
सार्वजनिक यातायात खोल्ने सरकारको निर्णय, भाडा बढ्यो
रु छ लाख भाडा छुट
थप एक सय ८ जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या १६ हजार ५३१ पुग्यो
डब्लूएचओमा जागिर लगाइदिने लोभ देखाएर ठगी
दुई वर्षसम्म ब्याज तिर्न सक्दैनाैँ : पर्यटन व्यवसायी
केशलिया खोला डिलको निर्माणाधिन पार्क विवादमा
धरानमा आगलागी हुदा २ घर जलेर नष्ट
धरानका राई मृत अवस्थामा फेला
यूएईको ट्रान्सगार्ड ग्रुप कम्पनीमा नेपाली कामदार अलपत्र ( भिडियो सहित)
आजको राशिफल / वि.सं. २०७७ आषाढ २३ गते मङ्गलबार || श्री पाथीभरा माताले सबैको कल्याण गरुन
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पुगे लद्दाख
१२ वर्षकै उमेरमा प्रेम, बालविवाह गराउने पाँच जना पक्राउ
सुनको मूल्य रु ९२ हजार ४०० पूग्याे
बदमासमा दिपेन्द्रसंग सोनीका रोकायाको रोमान्स (भिडियो सहित)
विराटनगरस्थित होटल जेनियल बन्द